निषेधाज्ञामा पनि बीरगञ्जमा मदिरा पसल संचालन, रक्सी खान भारतीयहरुको लर्को - नेपालबहस
निषेधाज्ञामा पनि बीरगञ्जमा मदिरा पसल संचालन, रक्सी खान भारतीयहरुको लर्को
| १३:५०:११ मा प्रकाशित
२६ जेठ, बीरगञ्ज । प्रहरी चौकी सबैठ्वाको मिलोमतोमा तस्करी फस्टाएको र अवैध घरेलु मदिरा पसल संचालनमा रहेको भेटिएको छ । दिनहुँ यो एरियाबाट कपडा, हार्डवेयर ,मेिशनरी पार्ट ,भैसी, किराना आइटम ,आलु प्याज ,राजनिवास र रजनीगन्धाको तस्करी भइरहेको छ ।
कोरोना महामारीको समयमा पनि प्रहरी चौकी सबैठवाको संरक्षणमा अवैध घरेलु मदिरा पसल संचालनमा रहेको छ । महामारीको समयमा पसल बन्द गर्न लगाउने, भीडभाड गर्न नदिने जस्ता जनचेतना जगाउँदै हिड्नु पर्ने प्रहरीकै संरक्षणमा अवैध मदिरा पसल संचालन हुनुले प्रहरी माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
स्थानीय जनता भन्छन्, यो कस्तो प्रहरी प्रशासन हो ? कोरोना महामारीसँग सुरक्षित रहन र फैलन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जिल्लाभरी निषेधाज्ञा र सीमा नाका बन्द गरेको छ । तर सबैठ्वामा प्रतिदिन २ सयको हाराहारीमा भारतीयहरु रक्सी खान नेपाल आउने गरेका छन् । के यसबाट करोना सर्दैन ?
लकडाउनमा अवैध मदिरा पसल संचालन र ८०/८५ जना भारतीयलाई भट्टी पसलमा रहेका र होहल्ला गरेको देखेर प्रहरी चौकी सबैठ्वाका इन्चार्ज बिटु सिंहलाई जानकारी गराउँदा असई सिंहले आफूसँग कुरा गर्ने टाइम नभएको भनेर फोन काटेको थिए । एकजना मदिरा पसल संचालकका अनुसार प्रति मदिरा पसल संचालकसँग मोटो रकम बुझी संचालन गर्न अनुमति दिएको बताए ।
प्रहरी चौकी सबैठ्वाका इन्चार्ज बिटु सिंह निकै बदनाम भएका असई हुन । उनी प्राय जसो बोर्डर एरियामा नै इन्चार्जको रुपमा हाकिमलाई विभिन्न लोभलालचमा पारी जाने गरेका छन् । असई सिंह तस्करी गराउनमा निकै खेलाडी माहिर खेलाडी भएको प्रहरीहरु नै बताउँछन् ।उनले प्रहरी चौकी मिर्जापूरमा बस्दा गिटी ,बालुवा र विभिन किसिमको तस्करी गराएपछि निकै बदनाम भएका थिए ।
देवघाटको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने १७ घण्टा पहिले
निर्धारित समयमा पनि सकिएन खानेपानी आयोजना ४ दिन पहिले
कोरोनाबाट प्याब्सनका सल्लाहकार महर्जनको निधन २ हप्ता पहिले
कलाकार घिमिरेको उपचारका लागि बैंक खाता सञ्चालन १ हप्ता पहिले
महाकालीमा पानीको सतह बढेसँगै जोखिम उच्च ७ दिन पहिले
वृद्धभत्ता ४ हजार पुग्याे ४ हप्ता पहिले
ओलीको अनावश्यक दुई तिहाई, राजनीतिक अस्थिरता चुलिने संकेत १ वर्ष पहिले
बेलायतमा चारमध्ये एक जना खाद्य सङ्कटको जोखिममा १२ महिना पहिले
मालसामान बोक्ने ट्रक १ वर्ष पहिले
एकदिवसीय विश्वकपमा टिमको संख्या बढाइने ३ हप्ता पहिले